श्रीमान र श्रीमतीको उमेर अन्तर कति भए उत्तम मानिन्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
श्रीमान र श्रीमतीको उमेर अन्तर कति भए उत्तम मानिन्छ ?
हाम्रो समाजमा श्रीमानभन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुन्छ । अक्सर श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । र, यो उमेर अन्तर एकबर्ष, दुईबर्ष, चारबर्ष, आठबर्ष वा दश बर्षको पनि हुनसक्छ ।
कतिपय श्रीमानको उमेर श्रीमतीको भन्दा दोब्बर पनि हुन्छ ।
अपवाद हुन्, श्रीमतीको उमेर तुलनात्मकरुपमा बढी हुनु । केही समयअघि नेपाली अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुशमान देशराज जोशीवीच इंगेजमेन्ट भयो । उनीहरु चाँडै दाम्पत्य जीवन सुरु गर्ने चर्चा छ । आयुशमानभन्दा प्रियंका लगभग १० बर्षले जेठी छिन् ।
यसरी दम्पतीबीच हुने उमेर अन्तरले केही फरक पार्छ ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि हाम्रो सामाजिक प्रवृत्ति केलाउने प्रयास गरौं । हामीकहाँ कुनै नव दुलाहका लागि दुलही खोज्दा तुलनात्मक रुपले कम उमेरकै खोजिन्छ । अर्थात दुलाहभन्दा दुलहीको उमेर कम हुनुपर्छ । पितृसतात्मक सोंच–चिन्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ ।
याे पनि पढ्नुस श्रीमान्–श्रीमती नै चुनावी मैदानमा
किनभने अक्सर युवतीहरु पुरुषबाट सुरक्षा पनि खोज्छ । सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा । युवतीहरु चाहन्छन्, हुनेवाला श्रीमान् परिपक्क होस् । कामको हिसाबले, उमेरका हिसाबले, सोच चिन्तनका हिसाबले, व्यवहारका हिसाबले परिपक्क होस् । महिलाहरुमा सुषुप्तरुपले रहेको यही आकंक्षाले पनि उनीहरु आफूभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग सम्बन्ध गाँस्न रुचाउँछन् ।
सायदै होलान्, श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर बराबर भएको । धेरैजसो श्रीमतीको भन्दा श्रीमानकै उमेर बढी हुन्छ । तर, कति बढी ? यसको पनि कुनै सीमा छैन । कोही श्रीमान्–श्रीमती १ बर्षका जेठो(कान्छो हुनसक्छन् । कतिमा भने १० वा ११ वर्षको उमेर अन्तर हुनेगर्छ । यस किसिमको उमेर अन्तरले दाम्पत्य सुखमा केही असर गर्छ ?
याे पनि पढ्नुस रमाइलो चुट्किलाः श्रीमान्–श्रीमतीको गफ
जर्जिया एटलान्टाको एमोरी युनिभर्सिटीको अध्ययनकर्ताले यसै सम्बन्धमा एक अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा तीन हजार दम्पतीले भाग लिएका थिए । उक्त अध्ययनको ध्येय थियो कि, के कारण दाम्पत्य जीवन लामो समयसम्म सुमधुर रहनछ । अध्ययनका क्रममा उमेर, जाति, पढाई, रोजगार, धर्म, आय, परिवारमा सदस्य संख्याको जानकारी लिइयो । यस किसिमको डाटाबाट अध्ययनलाई भरपर्दो बनाउनका लागि रिलेशनसिप र प्रेमको दृष्टिबाट निष्कर्ष निकाल्न सहज भयो ।
यो अध्ययन केवल यही कुरा पत्ता लगाउनका लािग गरिएको थियो कि के वास्तवमा सफल र लामो सम्बन्धका लागि पार्टनरबीचको एज ग्यापले कुनै अर्थ राख्छ रु
ट्याग्स: husband and wife\_